Fitaovana vaovao hiadiana eo noho eo ny filana siramamy
Vaovao mahafaly ho an'ireo izay tsy mitsaha-mitombo amin'ny famitahana siramamy: Ny orinasa Israeliana Sweet Victory, Ltd., dia namorona andiana tsikombakomba mitsikombakomba azo avy amin'ny botany izay natao hampitsaharana ny fanirian-tsakafo mamy amin'ny lalany.
Miasa ao anatin'ny roa minitra ny firafitry ny tsikombakomba amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mpandray siramamy amin'ny lela, ary mety haharitra adiny roa ny vokany. Mandritra izany fotoana izany, ny sakafo na zava-pisotro mamy izay mamporisika ny saina dia hanandrana tsy misy dikany na marikivy mihitsy aza, ary mety hihena ny faniriana hanao zavatra mamy, maharitra ela kokoa noho ny vokany ara-batana.
Miala amin'ny fiankinan-doha amin'ny siramamy
Araka ny fanadihadiana momba ny fahasalamana sy ny sakafo ara-tsakafo eran-tany Innova Market Insights, tamin'ny taona 2021, 37% amin'ny mpanjifa eran-tany no nilaza fa nampihena ny fihinanana siramamy tao anatin'ny 12 volana lasa. Ireo ezaka ireo dia maneho ny fiheveran'ny besinimaro fa ny fihinanana siramamy be dia be no antony mahatonga ny toe-javatra isan-karazany, anisan'izany ny caries nify, ny fitomboan'ny lanjany ary ny diabeta. Ny fikarohana dia nanolo-kevitra ny anjara asan'ny siramamy amin'ny fampandehanana ny opiate receptors (ny foibe valisoa) ao amin'ny atidoha, izay afaka manazava ny toetra mahasarika azy. Ny American Heart Association dia manoro hevitra fa ny vehivavy dia mametra ny siramamy fanampiny tsy mihoatra ny enina sotro isan'andro (24 grama), ary ny lehilahy dia mametra ny siramamy fanampiny tsy mihoatra ny sivy sotro isan'andro (36 grama).
“Ny ankamaroantsika dia miady amin’ny faniriana mamy isan’andro”, hoy ny fanamarihan’i Gitit Lahav, psikology iray izay nandany efa ho folo taona nikaroka ny fifandraisan’ny sakafo sy ny psikolojia. Lahav dia niara-nanorina ny Sweet Victory niaraka tamin'i Shimrit Lev, mpampianatra ara-tsakafo matihanina. “Na dia mihamitombo aza ny fahatsiarovan-tena ny fiantraikan'ny fihinanana siramamy tafahoatra amin'ny fahasalaman'ny tena manokana, ny fandaka ny 'fahazarana' siramamy dia tena tolona ho an'ny ankamaroantsika. Izany no nanosika anay hitady vahaolana hanampy ny mpanjifa hifehy tsara kokoa ny safidiny ara-tsakafo.”
Miaraka amin'ny fiaviany momba ny botanika, i Lahav sy Lev dia nitodika tany amin'ny gymnema botanika Indiana fahiny, (Gymnema sylvestre) fantatra amin'ny fomban-drazana Ayurveda noho ny fiantraikany tsara amin'ny metabolisma glucose. Any India, fantatra amin'ny anarana hoe “gurmar” izy io, amin'ny fiteny Hindi ho an'ny “mpanimba siramamy.” Voalaza fa manakana ny fidiran'ny siramamy mihoatra noho ny fiantraikany amin'ny lela izy io. “Mitovitovy amin’ny molekiola gliokaozy ny firafitry ny molekiolan’ny asidra gymnemika bioaktifika”, hoy ny fanazavan’i Lev. "Ireo molekiola ireo dia mameno ny toerana misy ny mpandray ny tsirony ary manakana ny fampahavitrihana ny molekiola misy siramamy ao amin'ny sakafo, ka manakana ny faniriana siramamy."
Any Inde, tsakoina ny ravina gurmar mba hahazoana vokatra. “Taitra izahay noho ny haingan’ny fandehan’izany”, hoy ny fanamarihan’i Lev. "Nitady fomba fanaterana mandaitra kokoa, mahafinaritra ary mety kokoa ho an'ity anana ity izahay, ary noho izany dia niainga ny handresy ny tsirony mangidy." Nanandrana ny fomba fanamboarana siligaoma vita an-trano izy mirahalahy tamin'ny voalohany, tamin'ny fampiasana kojakoja fanaovana gum any an-trano. Avy eo izy ireo dia nampifangaro ny teknika sy ny fahalalany ara-tsakafo mba hahazoana fomba tsara indrindra amin'ny fampiasana siramamy voajanahary voafantina vitsivitsy. Ny raikipohy dia nohatsaraina kokoa noho ny fanampian'ny mpanamboatra siramamy israeliana malaza. Androany, taorian'ny fakana ravina gymnema organika any India, ny fanombohana dia manamboatra ny siligaoma miorina amin'ny zavamaniry ao amin'ny trano iray any Italia nankatoavina amin'ny famokarana fanampin-tsakafo azo ampiasaina ary misy tsiro roa: peppermint, citron ary ginger.
More on: Research | Italia | fahasalamana
Karaoke any Laos? Miomàna amin'ny zavatra maro kokoa manomboka ny Alatsinainy fahasalamana|
Ny Nosy Cayman dia mahazo fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fizahantany Cruise Research|
Vagal Nerve Stimulator vaovao hitsaboana COVID lava fahasalamana, Research|
Hoavy vaovao ho an'ny Global Aviation Saudi Arabia Style Italia|
Previous Famerenana amin'ny Mars: Avy amin'ny fitaovana famonosana taloha mankany amin'ny poop vaovao
Manaraka Ny ankamaroan'ny Amerikanina voakasika dia mankasitraka ny Psychedelics mba hitsaboana ny aretin-tsaina